Askar ku dhimatay miino lagu qariyay meyd hoostii - BBC News Somali
Askar ku dhimatay miino lagu qariyay meyd hoostii
Hindiya oo ku baaqday in cunaqabateyn lagu soo rogo koox ka dagaallanta Pakistan
Uganda oo tarxiishay madaxa shirkadda isgaarsiinta MTN
Itoobiya iyo Kenya oo ku heshiiyay ka shaqeynta nabadda deegannada xadka
Tebinta tooska ah oo saaka inoo soo bilaabatay intaasi ayay inooga dhan tahay, halkan kala socda wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka.
Posted at 13:35 15 Feb13:35 15 Feb
Maxkamadda sare ee Kenya oo ayidday guushii uu gaaray barasaabka gobolka Wajeer
Mohamed Abdi MohamudCopyright: Mohamed Abdi Mohamud
Barasaabka gobolka WajeerImage caption: Barasaabka gobolka Wajeer
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya ayaa ayidday guushii uu gaaray barasaabka gobolka Wajeer, Maxamed Cabdi oo in muddo ah dacwaddiisa ay taallay maxkamadaha Kenya.
Maxkamadda ayaa go’aanka ah kama dambeysta ah kusoo afjartay murankii natiijadii doorashada ee gobolka Wajeer.
Afar gasoore aya isku raacay go’aanka maxkamadda ay ku ayidday xalaal ahaanshaha natiijadii doorashada ee xilka barasaabka gobolka Wajeer sanadkii 2017-kii.
Horraan maxkamadda racfaanka ee Kenya ayaa ayyiday xukun ay hore u ridday Maxkamadda Sare ee Kenya, kaas oo ahaa in doorashadii uu hore ugu guulaystay barasaabka gobolka Wajeer, Maxamed Cabdi, ay ahayd mid u dhacday sifo aan sharci waafaqsanayn.
Posted at 11:34 15 Feb11:34 15 Feb
Labo kamid ah ciidammada dalka Burkina Faso ayaa ku dhintay miino lagu hoos qariyay qof meyd ah, meydka oo lagu soo daday dareeska militariga ayaa qarxay markii ay ciidammadu isku dayeen inay eegaan meydka, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Bayaan kasoo baxay militariga ayaa lagu sheegay ‘in uu qarxay markii ciidammada ay isku dayeen inay eegaan, waxaa ku dhintay labo kamid ah ciidammada halka 6 ay ku dhaawacmeen’
Qaraxa ayaa maanta ka dhacay magaalada waqooyiga ku taalla ee Djibo oo u dhaw xadka Burkina Faso uu la wadaago dalka Mali.
Burkina Faso ayaa kamid ah dalalka dagaalka kula jiro maleeshiyaadka islaamiyiinta ah ee ka dagaallama gobolka Saaxil.
In ka badan 300 qof ayaa ku dhimatay weerarada argagixisada ee afartii sano ee ugu dambeeysay ka dhacay dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Itoobiya iyo Kenya ayaa ku heshiiyay inay sameeyaan guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya xoojinta nabadda deegannada xadka ee labada dal, sida ay qortay warbaahinta Fana.
Guddiga joogta ee arrimaha xudduudaha Kenya iyo Itoobiya ayaa sidoo isku afgartay in laga hortaggo hubka sharci darrada ah ee laisaga gudbiyo xadka iyo falal dambiyeedyada kale ee ka dhaca deegannada xadka.
Kulankii 32-aad ee guddiga wadajirka ah ee labada dal ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Adama ee gobolka Oromada dalka Itoobiya.
Kulanka oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa looga hadlay arrimaha nabadda, hubka sharci darrada ah iyo sidii loo xoojin lahaa waxbarashada iyo arrimaha caafimaadka deegaanada ku yaalla xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Kenya.
Labada dhinac ayaa dib u eegis ku sameeyay qodobadii kasoo baxay shirkii guddiga wadajirka ah ee ka shaqeeya arrimaha xadka ay ku yeesheen magaalada Mombasa ee dalka Kenya sanadkii 2016-kii.
Posted at 9:33 15 Feb9:33 15 Feb
Booliska dalka Uganda waxay sheegeen in dalka ay ka tarxiileen madaxii shrkadda isgaarsiinta MTN ee Uganda, shirkaddan ayaa ka qeyb ka ah shirkadda kale ee isgaarsiinta ee Koonfur Afrika laga leeyahay.
Warar soo baxaya waxay sheegayaan in ninka loo masaafuriyay sababo ammaan darteed.
Madaxa fullinta shirkadda,Wim Vanhelleputte ayaa loo tarxiilay dalkii uu u dhashay ee Belgium, waxaana la galabnimadii Arbacadii la saaray diyaarad dalkaasi u jeeday.
ilaa hadda ma jiraan warar si rasmi ah uga soo baxay dowladda Uganda.
Bishii lasoo dhaafay, saddex qof oo ajaanib ah oo ka shaqeyn jirtay shirkadda isgaarsiinta MTN ayay dowladda Uganada tarxiishay.
Qaar kamid ah dadkaasi waxaa lagu eedeeyay inay huriyeen rabshado isla markaasna ay maalgelin ugu deeqayeen hoggaamiyaha mucaaradka,Bobi Wine.
Posted at 8:18 15 Feb8:18 15 Feb
Madaxweynaha oo sheegay in uusan xilka iska casili doonin
Madaxweynaha HaitiImage caption: Madaxweynaha Haiti
Madaxweynaha HaitiJovenel Moise ayaa sheegay in uusan dalka uga tegi doonin inay maamulaan koox burcad ah oo ka ganacsado daroogada.
Hadalka madaxweynaha Haiti ayaa kusoo beegmayaa xilli dalkiisa ay ka taagnaayeen dibadbaxyo rabshado wata oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof.
Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku eedeeyay madaxweyneMoise inuu geystay musuq maasuq, waxaa ay ugu baaqeen inuu xilka iska casilo.
Dhanka kale, Mareykanka ayaa muwaadiniinta qaar ugu baaqay in si deg deg ah ay kaga soo baxaan dalka Haiti.
Canada waxay si kumeel gaar ah u xirtay safaaraddii ay ku leedahay dalkaasi.
Posted at 7:42 15 Feb7:42 15 Feb
Cabdinur Sheekh Maxamad Isxaaq: Wariye laf dhabar u ahaa BBC-da
Cabdinuur Sheikh Mohamed oo BBC ka shaqeynayey 30 sano ku dhawaad ayaa haatan ka mid noqday wariyayaasha laanta af Soomaaliga ee dhawaan holwgabka ka noqon doona shaqada maadaamma barnaamijyadii loo soo wareejinayo Nairobi
''Markii aan ku soo biiray BBC waxaa igu adkaa qalabka iyo farsamadii lagu shaqeynayey oo ka duwaneyd tii Radio Mogadisho, balse tababar ka dib waa la qabsannay oo waxaa nala baray xataa wareysiga aad qaado sida aad u jarjari karto oo aad ugu habeyn karto waqtiga aad u haysato balse Radio Mogadishu ma jirin qof ama laba ka badan oo farsamada yiqiin oo waxaa xadidnaa qalabka,' ayuu yiri.
Posted at 6:43 15 Feb6:43 15 Feb
Dowladda Hindiya waxay ku baaqday in cunaqabateyn lagu soo roggo maleeshiyaadka Jeysh Al Maxamed oo weerar ismaadin ah ku qaaday ciidammada dalkaasi oo ku sugnaa gobolka Kashmir.
Xukuumadda Delhi waxay Qaramada Midoobey ka codsatay in liiska argagixisada ay ku darto maleeshiyaadka ka dagaallama Pakistan.
Ugu yaraan 40 kamid ah ciidammada sida militariga u tababaran ee dalka Hindiya ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen.
Pakistan waxay sheegtay inay ka xuntay qaraxa balse waxay beenisay eedeymaha inay wax ka ogeyd weerarka.
Bishii September ee sanadkii 2016-kii, ugu yaraan 17 kamid ah ciidammada Hindiya ayaa lagu dilay weerar lagu tilmaamay midkii ugu darnaa ee lagu qaado ciidammada dalkaasi ee sugan gobolka Kashmiir.
Posted at 6:26 15 Feb6:26 15 Feb
Waa Jimco taarikhda waxay ku beegan tahay 15-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka.
Tiro kamid ah ciidammada Hindiya oo qarax lagu laayay
Weerarkan ayaa lagu tiriyay khasaarihii ugu ballaarnaa ee soo gaara ciidammada Hindiya ee ku sugan gobolkaasiImage caption: Weerarkan ayaa lagu tiriyay khasaarihii ugu ballaarnaa ee soo gaara ciidammada Hindiya ee ku sugan gobolkaasi
Ugu yaraan 12 kamid ah ciidammada sida militariga u tababaran ee dalka Hindiya ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay ciidammadu saarnaayeen.
Ciidammada ayaa marayay qeybta Hindiya ay maamusho ee ka tirsan gobolka Kashmiir.
Booliska ayaa BBC u sheegay in qaraxa lala beegsaday ciidammada laga hagayay meel fog.
Koox ka dagaallanta dalka Pakistaan oo lagu magacaabo Jeysh Al Muxamed ayaa sheegtay inay ka dambeeysay weerarka.
Qaraxa lala beegsaday ciidammada Hindiya ayaa ka dhacay waddo si weyn ammaankeeda loo adkeeyay oo ku taalla inta u dhexeeysa magaalooyinka Srinagar iyoJammu.
Warbaahinta maxalliga ayaa ku warrantay in ugu yaraan 40 kamid ah ciidammada ay ku dhaawacmeen weerarka, sida ay saraakiil kasoo xigatay wakaaladda wararka ee PTI.
Wakaaladda wararka ee AFP waxay sheegtay in kooxda Jeysh Al Maxamed ay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan inay geysteen weerarka.
Posted at 11:42 14 Feb11:42 14 Feb
Iiraan oo ku eedeysay Mareykanka iyo xulafadiisa inay ka dambeeyeen weerar lagu dilay tiro kamid ah ciidammada dalkaasi
Xasan Ruuxaan, madaxweynaha IiraanImage caption: Xasan Ruuxaan, madaxweynaha Iiraan
Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaani ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka inay ka dambeeyeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay 27 kamid ah ciidamada kacanka ee Iiraan.
Madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in Israa’iil iyo dalal qani ah oo ka tirsan Khaliijka Carabta ay yihiin kuwo ugu weyn ee maalgalinta u fidiya argagixisada Bariga Dhexe.
Ciidammada kacaanka Iiraan ayaa lala beegsaday qarax ismaadin ah xilli ay baabuur ku marayeen deegaan dalkaasi uu la wadaago xadka Pakistan.
Koox maleeshiyaad ah oo lagu magacaabo Jeysh Al Cadl ayaa sheegtay inay ka dambeeysay weerarka.
Posted at 11:09 14 Feb11:09 14 Feb
Mareykanka oo weerar ku qaaday 'Al Qaacidada Libya'
Waxaa lagu soo warramayaa in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeymo cirka ah ku beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al Qaacidda koonfurta dalka Libya.
Dowladda ay ictiraafsan tahay Qaramada Midoobey ee Libya ayaa sheegtay in kooxaha jihaad doonka la bartilmaameedsaday xilli ay ku sugnaayeen agagaarka magaalada Ubari.
Weli shaaca lagama qaadin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Dowladda waxay sheegtay in Mareykanka ay kala kaashatay fullinta weerarka.
Mareykanka weli kama uusan hadlin duqeyntan balse waxaa uu horraan weerar ku qaaday dagaalyahanada Al Qaacidda iyo kooxda isku magacaawday Khilaafada Islaamka ee ku sugan Libya.
Posted at 9:43 14 Feb9:43 14 Feb
Maxkamadda sare ee dalka Kenya xukun dil ah ku riday sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalkaasi oo loo heystay dilka qof uu soo xiray muddo laga joogo lix sano.
Nahashon Mutua ayaa maxkamaddu dambi ku heshay bishii Disembar ee sanadkii lasoo dhaafay kaddib markii la sheegay in uu jirddil u geystay nin lagu magacaabo Martin Koome,
Ninkaasi ayaa u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray garaaca uu geystay sarkaalka.
Maxkamadda waxay caddeysay in Nahashon Mutua uu ka dambeeyay dilka qofkaasi.
Go’aankan kasoo baxay maxkamadda ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay ee ka dhanka dilalka sharciga ka baxsan ay booliska geystaan.
Ha’yadaha u doodo xuquuqul insaanka ayaa diiwaan geliyay boqolaal dhacdooyin ah oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan iyo tacaddiyada ay geystaan booliska.
Posted at 8:57 14 Feb8:57 14 Feb
Xayawaan naadir ah oo lagu arkay dalka Kenya
Waxaa dalka Kenya lagu arkay xawayaan mar la arag ah oo sawirradiisa sii weyn loo baahiyay.
Xawayaanka oo kamid ah noocyada ‘Shabeelka’ ayaa madow, waxaana lagu arkay duleedka seeraha Laikipia.
Waxaa jiraa warar sheegaya in markii ugu horreysay muddo 100 sano ah xayawaankan lagu arkay qaaradda Afrika.
Xawayaanka ayaa la sheegay in uu jiro labo sano isla markaasna uu yahay lab.
BURRARD-LUCAS PHOTOGRAPHYCopyright: BURRARD-LUCAS PHOTOGRAPHY
Posted at 6:35 14 Feb6:35 14 Feb
Tiro kamid ah ciidammada kacaanka Iiraan oo qarax ku dhintay
Wakaaladda wararka ee Fars ayaa baahisay sawirro muujinaya khasaaraha uu geystay qaraxaImage caption: Wakaaladda wararka ee Fars ayaa baahisay sawirro muujinaya khasaaraha uu geystay qaraxa
Ugu yaraan 27 kamid ah ciidammada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen ciidammada, sida ay ku warrantay warbaahinta dalkaasi.
Ciidammada ayaa marayay gobolka Sistan-Baluchestan oo u dhaw xadka Iiraan uu la wadaago Pakistan.
Maleeshiyaad lagu magacaabo Jeysh al Cadl ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka.
Ciidammada kacaanka Iiraan ayaa la aasaasay wax yar un kaddib markii la bilaabay kacaankii islaamiga sanadkii 1979-kii, waxaa ay door weyn ka ciyaaraan awoodaha militariga, siyaasadda iyo dhaqaalaha Iiraan.
Ciidammada kacanka Iiraan qeybtooda ku sugan koonfur bari dalkaasi waxay sheegeen in ciidammada markii la weerarayay ay kasoo laabteen deegaan u dhaw xadka Pakistaan uu la wadaago dalkaasi.
Kooxda Jeysh Al Cadl ayaa sheegay inay u dagaallamayaan xuquuqda dadka sunniyiinta ee ku sugan Iiraan kuwaas oo cabasho ka muujiyay in la gacan bidxeeyay.
Posted at 6:14 14 Feb6:14 14 Feb
Waa Khamiis taarikhda waxay ku beegan tahay 14-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka.
Posted at 13:03 13 Feb13:03 13 Feb
Diyaarad ay saarnaayeen shan qof ayaa ku burburtay meel u dhaw magaalada Kericho ee gabeedka dalka Kenya.
Diyaaradda oo ay saarnaayeen afar qof oo ajaanib ah ayaa kasoo dhaqaaqday seeraha loo dalxiis tego ee Maasai Mara, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Madaxa booliska gobolka uu shilka ka dhacay ayaa sheegay in diyaaradda ay ku wajahneyd magaalo la yiraahdo Lodwar.
Shaqaalaha gurmadka deg deg ah ayaa loo diray goobta ay diyaaradda ku burburtay.
Wargeys kasoo baxa dalkaasi ayaa barta Twitter-ka soo geliyay sawirka shilka.
Posted at 12:20 13 Feb12:20 13 Feb
Sarkaal ka tirsan ciidammada Soomaaliya oo loo xiray dilka rag loo shakisanaa inay ahaayeen Al Shabaab
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga oo loo heysto inuu ka dambeeyay dilka lix qof oo looga shakisanaa inay Al Shabaab ka tirsanaayeen, sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga.
Lixda qof ayaa horraantii sanadkan lagu toogtay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Dilka raggan looga shakiyay inay xubin ka ahaayeen Shabaab looma marin wax maxkamad ah.
Sarkaalka oo lagu magacaabo Farxaan Maxamed Turbo ayaa lagu xiray magaalada Muqdisho kaddib markii qaar kamid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya ay ku eedeeyeen in askariga uu geystay dil ka baxsan sharciga.
Warbaahinta qaar ayaa ku warrantay in xildhibaanada ay kasoo jeedaan gobolka lagu dilay raggan.
Bishii Disembar ee sanadkii lasoo dhaafay, taliska ciidamada Soomaaliya ayaa amar ku siiyay ciidammada inay toogtaan dagaallamayaasha ka tirsan Al Shabaab 'meeshii ay ku arkaanba'.
Posted at 11:59 13 Feb11:59 13 Feb
Booliska Kenya oo xabsiga dhigay dad looga shakisan yahay dilka haweeney
Booliska Kenya waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen lix qof oo lala xiriirinayo dilka haweeneey u doodi jirtay xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Caroline Mwatha.
Agaasimaha laanta dambi baarista Kenya, George Kinoti ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in booliska ay rumeysan yihiin in haweeneyda ay u geeriyootay markii ilmo laga soo xaaqay.
Dadkan laga shakisan yahay ayaa la sheegay inay u fududeeyeen haweeneyda inay marto hannaan khaldan oo ay ilmaha isaga soo xaaqday.
Mwatha ayaa waxay wax ka qori jirtay dilalka sharci darrada ah ay booliska Kenya ay geystaan gudaha magaalada Nairobi.
Qaabka uu sirdoonka Suudaan ay u dhibaateeyaan dibadbaxyaasha
BBC-da ayaa baahisay wararka ah in tacaddiyo ka dhan xuquuqda aadanaha ay geysteen laamaha ammaanka dalka Suudaan xilli ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda.
Qeybta dabagalka ee BBC Africa Eye ayaa baaritaanno ay ku sameysay 200 muuqaallo ah oo baraha bulshada lasoo geliyay ku ogotaay in si toos ah looga soo duubay dadkii dibadbaxa ka dhigayay gudaha waddanka Suudaan.
Muuqaallada ayaa muujinaya boolis isugu dhar cad iyo kuwo hubeysan oo waddooyinka ku garaacaya dadka bannaanbaxa dhigayay.
Waxaa la arkaya booliska Suudaan oo xir xirayo dibadbaxyaasha xilli ay ku qaadayeen baabuur.
Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in dadka qaar lagu jirddilay xarumo qarsoodi ah, labo kamid ah xarumahaasi ayay BBC ogaatay.
Saraakiisha Suudaan waxay beeniyeen inay jiraan xarumo qarsoodi ah oo lagu jirddilay dadka bannaanbaxa dhigayay.